Wikipedia Soomaaliga waxaa ku jirta 5,515 maqaal, Hubi gaarista ama habka mobilka
3 Rabi' al-thani 1440 H
Antarktika (Af-Ingiriis: Antarctica; Af-Carabi: القارة القطبية الجنوبية; loogu dhawaaqo: i/ˈɑrktɪkə/ iyo /ˈɑrtɪkə/) waa qaarada ugu xigta koonfurta Aduunka, taasi oo juquraafi ahaan noqoneysa Cidhifka Koonfureed ee dhulka. Qaarada Antarktika waxay ka mid tahay gobolka Antarktik ee waaxda koonfureed ee dhulka, taasi oo qeyb ka yihiin Iskuwareega Antarktik iyo Bada Koonfureed. Baaxada dhulka Antarktika waa mid aad u balaadhan, waxaana lagu qiyaasay 14.0 milyan kilomitir labo jibaaran (5.4 milyan mayl labo jibaaran), taasi oo ka dhigeysa qaarada shanaad ee ugu weyn aduunka - waxaa ka weyn Afrika, Aasiya, Waqooyiga Ameerika iyo Koonfur Ameerika.
Taariikhdu Maata Waa 13 Diseembar 2018 Isuduwaha Waqtiga Caalamiga (UTC) – Hagaaji Bogga
Malaysia Airlines Flight 370 (sawirka diyaaradda), kasoo kacday Kuala Lumpur kuna socotay Beijing lana socdeen 239 qof, ayaa lagu waayey Gacanka Thailand.
Maxkamadda dembiyada dagaalka ayaa ku heshay nin u dhashay kongo ee Germain Katanga dembi.
2014 Winter Paralympics 2014 Winter oo la furay Sochi, Ruushka.
Gobol Ukrain ka mid ah oo la modoobaya Ruushka kuna biiraya Federeeshinka ruushka.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir Muungaab ayaa booqday qaar ka mid ah dagmooyinka xamar.
Warar dheeraad ah...
Wiki Wararka – Dhacdooyinka Hadda iyo dheeraad...
Waxyaabaha ku jira · Hooyga Wikiga · Qaybaha Guud · Lagu soo koobay Xul · Tusmo A-Z
Baayooloji · Diimaha · Sooyaal · Taariikh · Farsamo · Hiddaha iyo Dhaqanka · Juqraafi · Xisaab · Caafimaad · Diyaaradaha · Saynis · Falsafad · Fiisikis · Qaynuun · Kimistari · Bulsho · Dhamaan Hooyga Wikiga
Amiibada waxay ka mid tahay xayawaannada kuwa ugu dhismo sahlan inta la yaqaan. Waxay ku nooshahay dhoobada iyo jidhaamaha guntooda, wayna adagtay in isha lagu arko. Saxar aad u yar bay le'egtahay. Dheererkeeduna wuxuu gaari karaa 0.025 sm.
Haddii la qeexo waxaa lagu tilmaami karaa xab nool. Waxaad moodaa marka la arko in aan nafi ku jirin. Iyada oo intaas le'eg bay waxay doonto qabsan kartaa, wey tarmi kartaa, wax cuni kartaa, socon kartaa, wax qaban kartaa sida noolaha kale. Haddii aad si fiican ugu eegtid weyneeysada ameebadu waxay u egtahay cuf ma-qumane ah oo ka samaysan borootobalaasma u eg xab. Waxaana ku wreegsan xuub balaasma oo aad u sar yar. Marka aad u fiirsatid amiibada firfircoon, waxaad arki dooontaa in saytoobaalsamkeedu qulqulaayo, saytoobalaasamkaa qulqulaaya ayaa ayaa cadaadiya xuubka balaasmaha, sameeyana tuuro loo yaqaan addimobeeneedyo.
Saytoolaasamku laba nuuc ayuu u kala baxaa. Balaasma duleed waa inta ku xigta xuubka unugga, waxaana la moodaa biyo nadiif ah. Balaasma gudeed waana saytoobalaasamka inta ka hoosaysa balaasma duleedka. Balaasma duleedka wuu ka culus yahay balaasma gudeedka, waxaana la moodaa xab midab dambas le. Bu'da waxay ku dhex jirtaa balaasma gudeedka, waxayna u egtahay sidii wax xuub ku wareegsan yahay oo kale. waxaana balaasma-gudeedka ku dhex jira saxarro aad u yaryar, kaasoo ah haraagii noolihii yaryaraa ay dheefshiidday. Saxarradaa yaryar waxaa ku wareegsan hoor sidii xumabada ah oo uu ku wareegsanyahay xuub, Daloolkaasna waxaa loo yaqaan doalool cunteed.
Dareenka amiibada Amiibada malaha xubno ay wax ku dareento, waxaase jirta in sytoobalaasamka dhamiba deegaanka dareemi karo. Tusaalo ahaan haddii aysid ama alkol barxan lagu shubo agagaarka amiiba nool, si tartiib ah ayeey uga faagataa labadooda.
Marka ay amiibadu la kulanto wax ay cuni karto, way liqdaa iyad oo ku xaraya dhibco biyo ah, iyo addin-beeneedyada. Qayb ka mid ah xuubka amiibada ayaa wuxuu noqdaa liid ku wareegsan dalool cunteed ku dhex jira saytoobalaasamka. Xuub kale oo cusub ayaa si dhaqsi ah uga samaysa oogada, halkii dalool cunteedku unugga ka soo galay. Dheefta xayawaanka waxaa shiida insaymyo usii daaya saytoobalaasamku, insaymyadaas oo u gudba xagga dalool cunteedka oo la falgala walxaha cuntada ku jira. Dheefta la shiiday waxaa nuuga saytoobalaasamka, waxaana laga helaa tamarta ay ubaahantahay amiibadu iyo walxaha kale ee lagu suubin karo borotoobalaasamka. Saxarrada la dheefshiidi kari waayana waxay ku haraan dalool cunteedka waxayna ka bixi karaan meel kasta oo xuubka ah, oo ay debedda ubixi karaan.
MAQAALKA SII AQRI · Maqaallo kale oo Kala duwan
Ma ogtahay dheeraad ka sii aqriso halkaan...
Waxaa La Yiri
Minjo dhooqo leh, marba mid baa la siibaa ama la'qadaa *** Naag, naag ka umulisay iyo nin reer u weyni, midna siday wax u ogyihiin uma sheegaan.
Xoolo quureed waa la qaataa, soor quureedse lama qaato. *** Wax aanad filaneyn iyo fallaari waa kaa fuc siiyaan ( fajaciyaan).
Wiki – Oraah Kale
Oraahda Saxda ah
Expression error: Unexpected < operator. round 0 }}
Federaal: waaxaa soo batay maalmahaan oraahda ah soomaaliya waa Federaal, Dastuurka Soomaaliya ee ah Federaalka
Waxaa haboon in la dhaho: Sida Saxda ah waa Jamhuuriyadda iyo Dastuur KMG
maadaama aan afti dadweyne lagu ansixin
Wikit – Fiira gaar ah ee kale
Wikipediyahaan waxaa ku qoran Af-Soomaali. waxaa la bilaabay 2001, hadda waxaa ku jirto in kabadan 5,515 oo maqaal. Luqadaha kale oo ugu waa weyn hoostaan ee ku tixanyihiin
Waxaa laga keenay "https://so.wikiyy.com/w/index.php?title=Bogga_Hore&oldid=132249"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 21:27, 12 May 2014.